कसरी हेरचाह र काठ को फर्नीचर सफा गर्न को लागी सजाउनुहोस्
मारिया vazquez | 13/09/2021 10:00 | फर्नीचर
काठ हाम्रो घर मा एक महान भूमिका छ। यो मा सबैभन्दा लोकप्रिय सामग्री मध्ये एक हो फर्नीचर निर्माण र सबैभन्दा धेरै यसको प्रतिरोध र स्थायित्व को लागी धन्यवाद पछि खोजिएको छ। यी विशेषताहरु, जे होस्, हामीलाई सुरक्षा, हेरचाह र काठ को फर्नीचर ठीक संग सफाई बाट छुट छैन यदि हामी यो राम्रो उपस्थिति राख्न चाहन्छौं।
वार्डरोब, ड्रेसर, टेबल, साइड टेबल, कुर्सी, headboards ... धेरै काठ को फर्नीचर हाम्रो घर मा एक ठाउँ पाउन, तर हामी कसरी यो सफा गर्न जान्नुहुन्छ? यदि तपाइँ धेरै स्पष्ट हुनुहुन्न भने, हाम्रो ध्यान दिनुहोस् हेरचाह र काठ को फर्नीचर को सफाई को लागी सुझाव, धेरै सरल चालहरु को लागी हामी तपाइँ संग साझा गर्छौं ताकि उनीहरु एक लामो समय को लागी तपाइँको घर लाई सजाउन सक्छन्।
1 सामान्य हेरचाह
2 काठ को फर्नीचर को लागी गहिरो सफाई
2.1 वार्निश वा lacquered फर्नीचर मा
2.1.1 यो दाग छ?
2.2 तेल संग भान्छा क्याबिनेट मा
काठ एक प्राकृतिक सामाग्री संग छ दुई घोषित दुश्मन, पानी र सूर्य। काठ एक झरझरा सामाग्री हो र जस्तै पानी अवशोषित गर्दछ, त्यसैले यो यसको संरक्षण को लागी यी फर्नीचर मा तरल पदार्थ फैलन बाट बच्न को लागी महत्वपूर्ण हुनेछ। न त सूर्यको किरणहरु यी फर्नीचर संग साथीहरु हुन्। यिनीहरु लाई प्रत्यक्ष एक्सपोजर कारण उनीहरुको रंग हराउन र समय संगै बिग्रेको छ, त्यसैले यदि तपाइँ उनीहरु लाई एक लामो समय सम्म रहन चाहानुहुन्छ, तपाइँ उनीहरुलाई उनीहरुलाई उजागर गर्न बाट जोगिनै पर्छ।
प्राकृतिक काठ फर्नीचर, कुनै उपचार बिना, अधिक यी खतराहरु को लागी उजागर छ। तेसैले, जहाँ सम्म सम्भव छ, यो सधैं सल्लाह छ मोम वा वार्निश संग यी उपचार। पहिलो व्यक्तिहरु धेरै चमक वा फर्नीचर को रंग एक ध्यान दिएर तरीका मा परिवर्तन गर्दैनन्, त्यसैले उनीहरु एक राम्रो छनौट को रूप मा यिनीहरु लाई प्राकृतिक रूपमा छोड्न, तर सुरक्षित छन्।
सफाई, निस्सन्देह, यो पनि महत्वपूर्ण छ कि काठको फर्नीचर यसको राम्रो उपस्थिति गुमाउँदैन। हरेक हप्ता सल्लाह दिइन्छ तिनीहरूलाई एक नरम कपास कपडा संग सफा गर्नुहोस् धुलो र फोहोर हटाउन को लागी जो मुख्य रूप देखि जोड़हरु, राहतहरु या नक्काशी मा जम्मा हुन्छ। यदि फर्नीचर मा पनि एक गहिरो रेखाचित्र छ, तपाइँ एक धेरै नरम टूथब्रश वा सफा गर्न को लागी ब्रश को उपयोग गर्नु पर्छ। Vacuuming को गल्ती नगर्नुहोस्; होइन, कम से कम, सतह मा यो समर्थन।
काठ को फर्नीचर को लागी गहिरो सफाई
समय समयमा तपाइँको काठ को फर्नीचर एक अधिक गहन सफाई को आवश्यकता हुनेछ। एक सफाई कि तपाइँ पनि फर्नीचर को पुनरुत्थान गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई हाइड्रेट गर्नुहोस् र यसलाई चमक दिनुहोस्। र यो सबै बस्तुहरुको उपयोग कि म पक्का छु कि तपाइँ पहिले नै घरमा हुनुहुनेछ।
वार्निश वा lacquered फर्नीचर मा
वार्निशले फर्निचरको काठलाई सम्भावित खरोंच र खरोंचबाट बचाउँछ। यसले आर्द्रतालाई सुस्त बनाउँछ, यद्यपि हामी सधैं दिमागमा राख्नु पर्छ कि यो बाहिर बाट र उल्टो बाट हुन्छ। यसबाट हामी के भन्न चाहन्छौं? कि यो पानी को एक अतिरिक्त संग फर्नीचर को एक टुक्रा सफा गर्न को लागी कहिले सल्लाह हुनेछैन ब्लीच वा अमोनिया जस्तै घर्षण उत्पादनहरु।
तपाइँको काठ को फर्नीचर को एक सामान्य सफाई गर्न को लागी आदर्श कुरा एक मा एक कपडा हल्का गीला गर्न को लागी हुनेछ तातो पानी विघटन र यो संग सतह मा जाने तटस्थ साबुन। तपाइँ बीटा को दिशा मा कपडा सार्दै र धेरै धेरै थिचेर यो गर्न को लागी हुनेछ। त्यसपछि, एक कपडा संग मात्र पानी मा भिजेको र अन्तमा एक सुख्खा कपडा अतिरिक्त नमी हटाउन को लागी सफा गर्नुहोस्। एक पटक गरे पछि, कोठा राम्रो संग हावामा पनी सुनिश्चित गर्नुहोस् कि फर्नीचर सुक्न सक्छ।
यो दाग छ?
दाग संग काठ को फर्नीचर सफा गर्न को लागी तपाइँ एक तैयार गर्न को लागी आवश्यक छ जैतून का तेल र सेतो सिरका को मिश्रण बराबर अनुपात मा। मिश्रणमा भिजेको कपासको कपडाको सहयोगमा, गोलाकार आन्दोलनहरु प्रयोग गरी फर्नीचर सफा गर्नुहोस्। त्यसोभए, उत्पादनलाई आधा घण्टाको लागी कार्य गर्न दिनुहोस् र यसलाई सुक्खा कपडाले पखाल्नुहोस्, धेरै दबाब बिना, यसलाई पोलिश गर्न। यदि यो पहिलो पटक हो तपाइँ यसलाई लागू गर्नुहुन्छ, फर्नीचर को एक सानो र अस्पष्ट क्षेत्र मा यो पहिलो गर्नुहोस् र अवलोकन गर्नुहोस्, हामी डराउन चाहँदैनौं!
त्यहाँ ती छन् जो सट्टामा यो मिश्रण को उपयोग जैतून का तेल र नींबू को रस वा नारियल तेल र isopropyl रक्सी को एक को उपयोग। एक कि तपाइँ को लागी सबैभन्दा सहज छ को उपयोग गर्नुहोस्, तपाइँ घर मा उत्पादनहरु मा निर्भर गर्दछ। र संग मिश्रण उत्पादन को सानो मात्रा यो आफैंमा धेरै दिन्छ!
तेल संग भान्छा क्याबिनेट मा
भान्सा फर्नीचर माटो को लागी अधिक उजागर छ। भान्सा मा, धूल को अलावा, आर्द्रता र तेल हामीलाई आवश्यकता हुन सक्छ धेरै पटक काठ को फर्नीचर सफाई यो एक लगभग दैनिक कार्य बनाउन। र सिरका उनीहरुलाई नयाँ जस्तै बनाउन को लागी प्रमुख उत्पादन हुनेछ।
पानी र तटस्थ साबुन संग एक सामान्य सफाई सामान्यतया एक दैनिक आधारमा पर्याप्त छ। जे होस्, यदि हामी बोसो जम्मा गर्न दिन्छौं सेतो सिरका आवश्यक हुन सक्छ यसको सामना गर्न। तपाइँ यसलाई अलमारी सफा गर्न कपडा मा undiluted वा थोरै पतला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ सक्नु हुन्छ, एक सुक्खा कपडा संग पुछ्नुहोस् र भान्सा को राम्रो संग सुक्न को लागी हावामा छोड्नुहोस्।
त्यहाँ केहि उत्पादनहरु छन् कि हामी हेरचाह र घर मा काठ को फर्नीचर को सफाई को जरूरत छ। र यो गर्न को लागी धेरै सजिलो छ यदि हामी यसलाई हाम्रो सफाई दिनचर्या मा एकीकृत गर्दछौं, जस्तै हामीले सफाई संगै गरेका थियौं काठको फर्श.
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » फर्नीचर » कसरी हेरचाह र काठ को फर्नीचर सफा गर्न को लागी
के गर्न को लागी घर को पर्खालहरु लाई स्वच्छ र सही अवस्थामा राख्न को लागी
9 सही रंग तपाइँको बाथरूम सजाउन को लागी